Ngokuvamile phambi umsebenzisi ukusebenza ethandwa sombhalo, nawu umbuzo ngokuqondene nendlela ukuze ujike umbhalo ku "uLizwi." Njengoba yezindlela ezisobala ukwenza ijika khona, kudala ubunzima obuthile. Futhi njengoba uhlelo ingenye ethandwa kakhulu, abasebenzisi abaningi bayamangala ngokungabi lesi sici, bese uqala ekuseni ekukhonondeni yalolu hlelo lokusebenza oluvela enkampanini ye-Bill Gates. Kodwa eqinisweni lokhu akufanele, ngoba "uLizwi," kulo inikezwa ingakhokhi ngisho nohlamvu olulodwa, kodwa ngezindlela eziningi lapho nje kudingeka ukuba kutholakale.
Ungavula kanjani umbhalo ku "uLizwi." indlela eyodwa
Ingqikithi le ndlela ukwenza umbhalo oqoshiwe. Ukuze wenze lokhu, hamba uye 'Faka "imenyu bese ukhetha ngaphansi kwesihloko esithi" Izinombolo ". Kwiwindi kuzovula into ekhoneni elingenhla esinxeleni "Umbhalo". Ngemva kokuchofoza isikhombisi zizoshintsha esiphambanweni. Manje ungacacisa endaweni lapho, futhi kuyodingeka ufake umbhalo. Ukuze wenze lokhu, isango kwesokunxele inkinobho yegundane bese uhudula uze uthole ubukhulu oyifunayo yasendle. Uma wayefisa, kungaba ke ukuhanjiswa futhi kukalwa khona ngokunemba ekhetheke kangaka uma udala edingekayo. Manje ekhoneni phezulu kwesokunxele kwakukhona ukhetho "kombhalo", isihloko okuyinto liyazikhulumela.
Ungavula kanjani umbhalo ku "uLizwi." indlela ezimbili
Ukuze indlela yesibili kuyodingeka ukudala uphawu, kabani nemingcele kungenziwa isethwe ku "Faka" menu, khetha "Ithebula." Uma uchofoza ke kuzovula iwindi elincane lapho ungacacisa inani lemigqa namakholomu kwethebula lapho ikusasa liyoba njani. Inombolo yabo incike esimweni ngabanye. Uma uphendukisa umbhalo "uLizwi" kuphela edingekayo ukuze igama elilodwa, yebo, kufanele isethwe kwemigomo eyodwa umugqa futhi ikholomu eyodwa. Uma etafuleni owadalwa phezulu kwephaneli ithebhu "Isakhiwo". Iqukethe ukhetho "kombhalo", okuyinto eyenziwa esebenzisa ukujikeleza okuqukethwe yeseli ohlangothini oyifunayo. Ukuze etafuleni umngcele aliveli uma uzitholele, uzodinga ukwenza olunye senzo. Kuyadingeka ukuba chofoza kwesokudla cell wadala ku imenyu yokuqukethwe, ukhethe "Amabhoda wokufiphaza." Ku-window esivula, kuyodingeka ukuthi uvule ithebhu "emngceleni", khetha top-iningi iphuzu, "Cha" bese ucindezela "OK".
Ungavula kanjani umbhalo ku "uLizwi" by 180 degrees
Kulezi zindlela ezingenhla, unenye komkhawulo. Umbhalo azikwazi ukufakwa "sibheke phansi", kokuba kwenziwe ukujika 180 degree. Nokho, ukuze sifinyelele lo mgomo, "uLizwi," has isendleleni. Okokuqala uzodinga ukudala into "WordArt", khetha ifomethi bese ufaka okuqukethwe oyifunayo. Khona-ke kufanele thola bese wenza kusebenze iphaneli "Izilungiselelo Image", lapho isici wadala uzobe waqonda njengoba uhlelo umdvwebo.
Ukwazi kanjani ukuze ujike umbhalo ku "ULizwi", ungakwazi ukushintsha kalula isiqondiso umbhalo. Kuye ngesidingo futhi umsebenzi ingasetshenziswa eyodwa noma ngenye indlela yokudala ezahlukeneyo engavamile lokunikeza ulwazi.
Indlela ukusetha isiphequluli ezenzakalelayo? Amathiphu namacebo